YAB နည်းပညာနှင့် Google သည် YI HALO ကို NAB 2017 တွင်ပြသခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ရီနည်းပညာနှင့် Google NAB 2017 မှာ Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းမိတ်ဆက်
ရီနည်းပညာနှင့် Google NAB 2017 မှာ Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းမိတ်ဆက်
အဆိုပါအများစုမှာအဆင့်မြင့် Stereoscopic, 360-ဘွဲ့, Pre-အမိန့်သည် Now ကိုရရှိနိုင်သော Professional ကဖန်တီးရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်များအတွက် Virtual Reality ဤနေရာသို့သွားရန်ကင်မရာ,
ရီနည်းပညာအဆင့်မြင့်, အသိဉာဏ်ပုံရိပ်နည်းပညာ, ဦးဆောင်, နိုင်ငံတကာ provider က, ယနေ့ရီရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်း, Google ရဲ့ဤနေရာသို့သွားရန်နည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်မယ့်လာမယ့်မျိုးဆက် virtual reality (VR) ကင်မရာပြသလိုက်ပါတယ်။ Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် VR ဖန်တီးသူ 'နှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး' 'အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖမ်းယူနည်းပညာပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ဘက်စုံသုံးနှင့်အတူချုပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဖန်တီးသူ, အရာအားလုံးတွေ့မြင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတက် သွား. , တက်ကြွ, စွဲငြိဖွယ်ရာ VR ပုံပြင်များကိုဖန်တီးနိုင်နှင့် ယုံကြည်မှုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများကို။
"Virtual အဖြစ်မှန်ဖန်တီးသူဘို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများပေးသည်," Sean Da, ရီနည်းပညာ၏ CEO ကပြောသည် "ဒါပေမယ့်လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေတစ်ခုလုံးအသစ်သောအဆင့်ကိုဖြစ်စေ။ အမှန်တကယ် VR ၏ဂတိတွေ့ဆုံရန်ရန်, ပုံရိပ်အရည်အသွေး, ဖမ်းခြင်းနှင့်အလှဆင်ခြင်းကိုစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တက်ကြွဖြစ်စေရန်, သငျသညျအခါသို့သော်သင်အလိုရှိအမြင်အများအပြားရမှတ်ထဲကနေ, တနျခိုးဆုံးရှုံးစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ, shoot နိုင်စေဖို့ရှိသည် ဖြစ်. , သင်ရုံယခုနှင့်အနာဂတ်အတွက်သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သိရန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ပြည့်စုံခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-စမ်းသပ်သည့် Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်း, သုတေသနဤမျှလောက်များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာရီပေါင်းဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ဖန်တီးသူထွက်ရှိယခုအရှိဆုံးအဆင့်မြင့် VR စနစ်ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်ပြုတော်မူမည်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်နိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ "
"ကျနော်တို့ကိုဖန်တီးရန်အရည်အသွေးမြင့် VR ဗီဒီယိုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် 2015 အတွက်ဤနေရာသို့သွားရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်; ဖမ်းမိ, post ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, နှင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်းဖြစ်စဉ်များ streamlining "Amit Singh က Google က VR များအတွက်စီးပွားရေး VP ကဆိုသည်။ " ထိုအချိန်မှစ. ဤနေရာသို့သွားရန်စွဲငြိဖွယ်ရာ, ဆွဲဆောင်မှုအလုပ်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီပေးခဲ့, ကြှနျုပျတို့ရီရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကင်မရာများ အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင်ခြေရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းအမြင့်ဆုံးသစ္စာ 360-ဖမ်းယူဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် အများဆုံးစတီရီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှု, သစ္စာနှင့်နှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများအရာပျောက်ဆုံးမရှိဘဲတိုင်းဦးတည်နေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြု, အဤနေရာသို့သွားရန်ပလက်ဖောင်းရဲ့အသာဖွင့်-အမြင်ကင်မရာယူနစ်အပါအဝင် 17 ကင်မရာယူနစ်ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါကောင်းချီးရီ 4K နှင့် 4K + အရေးယူကင်မရာများနေသူများကဖန်တီးသောသူအတူတူအင်ဂျင်နီယာများကတည်ဆောက်သည် Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းရဲ့စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံ, ဟာ့ဒ်ဝဲ, firmware ကိုနှင့် software thoughtfully ပုံရိပ်နည်းပညာ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်းပါပြီ။ စက်မှုဒီဇိုင်းပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, လျှပ်စစ်, firmware ကိုနှင့် optical အင်ဂျင်နီယာအရည်အသွေးမြင့် 8K x ကို 8K ထုတ်ပေးတဲ့ထုတ်ကုန်လြှော့, 360º stereoscopic VR တစ်စက္ကန့် 30 ဘောင်မှာဗီဒီယို, သို့မဟုတ် 5.8K တစ်စက္ကန့် 5.8 ဘောင်မှာ 360K, 60º stereoscopic VR ဗီဒီယိုက x ။
Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းအရှိဆုံးစွယ်စုံ 360-ဖမ်းယူဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် တောင်းဆိုဖန်တီးသူကြာကြာလွယ်ရိုက်ကူးခွင့်ပြုနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှ။ ကိုယ်ကသာ 100 watts ကဆွဲ, တစ်ဦး 50 မိနစ်ဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း AC အများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာပါဝါသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘက်ထရီအပါအဝင်ထက်နည်းခုနစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ခွဲပေါင်အလေးချိန်နှင့် mount ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အလွယ်တကူခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဤနေရာသို့သွားရန်ချုပ်အစမ်းကြည့်နှင့် automated, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ရိုးရှင်းသောက Android, Wi-Fi ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်တကွကြွလာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်း 360 ဒီဂရီရိုက်ကူးများအတွက်ပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်; ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှုတွေ 100,000 နာရီကျော်လျှက်, အကြမ်းခံယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အနာဂတ်-သက်သေဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကင်မရာဆက်တင်များနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများလွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု State-Of-The-အနုပညာ, အပူဒီဇိုင်းနှင့်ပြည့်စုံ built-in Screen ကို system ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဒါဟာသူတို့အနာဂတ်အတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်ကလွယ်ကူအသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းဖို့လုပ်မယ့် modular ကင်မရာတူးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသုံးပြုသူများကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးဖောက်သည်တစ်ဦးထောက်ခံကြောင်းအထုပ်နဲ့ One-click နှိပ်ပြီး firmware ကိုအဆင့်မြှင့်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။
Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းတစ်ဦးတည်းသာ NAB 360 မှာယနေ့မိတ်ဆက်ပြသရီရဲ့အဆင့်မြင့် 2017 ဒီဂရီဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းယနေ့ 360 ဒီဂရီအလိုအလြောကျ 360k နှင့် device ကိုဗီဒီယို / ရုပ်ပုံချုပ်အထိဖမ်းယူပူဇော်ဖို့စားသုံးသူ-grade ကိုရီ 5.7 VR ကင်မရာ, တစ်ခုတည်းသောကင်မရာကကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါ Virtual & တိုးပွား Reality Pavilion, Booth N360VR အတွက် NAB 2017 မှာရီရဲ့သစ်နှစ်မျိုးကိုထုတ်ကုန်ရီရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းနှင့် Yi 1121 VR ကိုကြည့်ပါနှင့်အတွေ့အကြုံ။ သို့မဟုတ်သွားရ www.yitechnology.com/yi-halo-vr-camera ပိုပြီးထွက်ရှာတွေ့ခြင်းနှင့်ကြိုတင်မှာယူမှုတက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်။
25 ကနေအင်္ဂါနေ့ပေါ်တွင်တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပတ်လည် Las Vegas မှ SuperMeet မှာထို့အပြင်ကုမ္ပဏီလိမ့်မယ်လည်းလက်ရှိထုတ်ကုန်, ဧပြီ 2017, 7: 00 ညနေ - 11: အရီယိုဟိုတယ်တွင် Brasila Ballroom အတွက် 00 ညနေ။
ATEME နှင့် ANEVIA သည်ရှယ်ယာအရင်းအနှီး၏ ၈၇% နှင့်အန်ဗီယာမဲပေးခွင့် ၉၀% ၏စုစုပေါင်းလေလံဆွဲခြင်းအတွက်အထူးသီးသန့်ညှိနှိုင်းမှုများသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ - ဇူလိုင်လ 31, 2020
ATEME သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုကုဒ်သွင်းရန် QNET Telecom ကိုခွင့်ပြုသည် - ဇူလိုင်လ 30, 2020
လူ ဦး ရေထူထပ်သော OTT ဈေးကွက်တွင်ရှင်သန်ရန်အဓိကသော့ချက် - ဇူလိုင်လ 22, 2020
CES2017 isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality 2017-04-27
ယခင်: "ငါသည်အချိန်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်ပါလျှင်": DoJ နဲ့ In-အိမ်ယူနစ်
နောက်တစ်ခု: DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးက Short Film သည်အသံ Capture